News - Kedu otu esi ahọrọ ikike igwe ọkụ laser nke ọma?
Na ndụ anyị na-adị kwa ụbọchị, anyị na-akpọkarị paịpụ igwe n'otu n'otu dị ka paịpụ ígwè, mana n'ọhịa nke ịkpụ ọkpọkọ, anyị ga-amata ọdịiche dị ma ọ bụ igwe ahụ bụ ọkpọkọ carbon steel, pipe silikon steel, pipe steel pipe, titanium alloy pipe or aluminum alloy pipe . N'ihi na ihe dị iche iche nwere njirimara dị iche iche dịka ike, ike, njupụta, na nguzogide okpomọkụ dị elu, otu esi ahọpụta ihe ziri eziigwe akuku laser ike?
The laser nwere dị iche iche utịp dị iche iche metal ihe. Ike laser dịgasị iche dị ka ihe ọla. Dịka ọmụmaatụ, na otu ọkpụrụkpụ, ike laser maka ịcha nchara carbon dị ala karịa nke igwe anaghị agba, na ike laser maka ịcha nchara nchara dị ala karịa nke odo. Ọla kọpa dị obere. Na mgbakwunye na ọdịdị nke ọla ahụ n'onwe ya, ọkpụrụkpụ nwekwara njikọ chiri anya na ike laser. Maka otu igwe ahụ, ike ịkụ 10mm dị ala karịa igbutu 20mm.
Banyere otu esi ahọrọ ikike ziri ezi, ekwesịrị ikpebi ya dịka ụdị, ọkpụrụkpụ, ọdịdị na ihe ndị ọzọ nke ihe a ga-ebipụ. Ya mere, mgbe ị na-azụta igwe ejiji laser, ị ga-eme ka onye nrụpụta mara njirimara nke ihe achọrọ ịkpụ. Ihe kachasị mma bụ inye ọkpọkọ ọkpọkọ ihe nrụpụta.
Ka ọ dị ugbu a, igwe eji egbu osisi laser na ahịa nwere ọtụtụ ike, sitere na 1000W ruo 15000W. Okpukpo nke ọtụtụ ndị na-emepụta nhazi ọkpọkọ dị n’etiti 8mm-12mm. Ọ bụrụ na ị belata oke ọkpụrụkpụ a ogologo oge, a na-atụ aro ka ịhọrọ igwe 4000W-6000W laser. Ọ bụrụ na ọ bụ ọla nwere njirimara ngosi dị elu, a na-atụ aro ka ị jiri igwe na-egbu laser na 8000W ma ọ bụ ike dị elu. 2000W-4000W laser pipe cutting machine akwadoro maka ọkpụrụkpụ n’etiti 5mm-8mm. Okpukpo ala nke 1000W na-abụkarị ihe zuru ezu. Ekwesiri ighota na oburu na izuta igwe eji egbu ahihia nke 6000W laser, mgbe ị na-egbu ihe ndi nwere obere ihe di ka ihe dika 4mm, inwere ike igbalite nmeputa mmeputa ma dozie ya na 2000W maka igbutu, nke na echekwa ike ma chekwaa ọkụ eletrik na ugwo.
Post oge: Mee-04-2021